Angela Merkel oo 'ku eedoowday' arrimaha qaxootiga - BBC News Somali
Angela Merkel oo 'ku eedoowday' arrimaha qaxootiga
2 Luulyo 2018
Image caption Angela Merkel iyo Horst Seehofer
Wasiirka arrimaha dibedda ee dalka Jarmalka ayaa wada qorsho uu kula kulmaayo Angela Merkel, kaddib markii uu ku hanjabtay inuu shaqada ooga tagaayo arrimo uu uga soo horjeedo sharciyadeeda dhanka soogalootiga ah.
Horst Seehofer oo hoggaamiye ka ah xisbiga (CSU), ahna xubin ka tirsan xisbiga isbahaysiga Mrs Merkel, ayaa ku ku doodaya in booliska aysan sameynin dadaalo ay ku celinayaan dadka ka soogalaya ee ka soo gudba xuduuda Bavarian ,balse Mrs Merkel ayaa weli tixgelinayso heshiiska Midowga Yurub.
Weryaha BBC-da Jenny Hill ee Paris ayaa sheegay in khatarta ay arinkan u leedahay ay tahay in Mrs Merkel ay weyneyso aqlabiyadda haddii uu dowladdeeda ka boxo Mr Seehofer .
Sida uu arrinkan isku badelaayo.
Axaddii ,xisbiga Mrs Merkel ayaa meelmariyey sharci lagu taageerayo booska ay ka taagantahay arrimaha soogalootiga.
Xoghaya guud ee xisbiga CDU Annegret Kramp-Karrenbauer ayaa sheegay in uu xisbiga aaminsanyahay in loo baahanyahay in xal loo helo arrimaha soogalootiga.
Mr Seehofer ayaa cabasho ka muujiyey in shirkii uu la galay saraakiisha ka tirsan xisbiga CSU uusan ka soo bixin wax natiijo ah, markii ay ka wadahadleen qorshaha cusub ee arrimaha dadka soo galootiga ah.
Dooni siday muhaajirin oo ku degtay badda Mediterranean-ka
Meydadka muhaajiriin badan oo laga soo saaray xeebaha ku dhaw dalka Maroko
Trump: Maraykanka ma noqon doono xero qaxooti
Image caption Xuduuda Bavaria
Madax sarsare ee ka tirsan dowladda Jarmal ayaa sameeyey dadaalo badan , iyagoo isku dayaya in Mr Seehofer uusan shaqada ka tagin, dadkaas ayaa waxa ka mid ah guddi ka tirsan baarlamaanka." Waa go'an aan gabi'ahaanbo aanan aqbalaynin," ayuu yiri Mr Dobrindt
Galinkii hore ee Isniinta, hoggaamiyaha xisbiga ayaa ku dhawaaqay waxyaabihii ka soo baxay wadahadaladii ugu dambeeyey ,iyadoo la eegayo danta dalka iyo tan isbahaysigaba.
Miyuu jira dadaal dhanka awooda ah?
Jawaabtu waa 'haa', Midowga isbahaysiga CDU-CSU oo la aasaasay muddo toboneeyo sano ka hor ayaa hadda waxay ku suganyihiin xaalad xun .
Hase yeeshe , ra'yiga dadweynaha oo la soo aruuriyey ayaa lagu ogaaday inay shacabka aad ugu qanacsanyihiin Mrs Merkel marka la barbardhigo hoggaamiyaha xisbiga CSU.
Xagay ka taagantahay Mrs Merkel arrinkan ?
Mrs Merkel ayaa kulan dheer maalintii Jimcaha ahayd la yeelatay hoggaamiyaasha Midowga Yurub oo looga hadlaayo arrimaha soogalootiga.
Waxa ay sheegtay in Giriiga iyo Spain ay ogolaadeen inay soo dhaweynayaan dadka muhaajirinta ah ee lagu hayo xudduuda u dhexeysa Bavaria iyo Austria .
Hase yeeshe ,Talyaaniga oo ay soo maraan dad badan oo muhaajirin ah ayaan doonaynin inay dib u qaataan marka ay soo gaaran Jarmalka.
Qaar ka mid ah 14 dal oo ka tirsan waddamada Yurub ayaa aqbalay dadka soo galootiga ee soo gaara dalka Jarmal, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay dowladda.
Dowladda Jarmalka ayaa ku kala qeybsan arrimaha soo galootiga , iyadoo saddex dal oo kalana ay sheegeen inaysan qeyb ka ahayn heshiis Jarmalka.